Mpanamboatra sy mpamatsy acrylic fotsy - orinasa vita amin'ny akrilika fotsy any Shina
Takelaka akrilika dia nanipy takelaka akrilika sy akrilika nesorina.
Atsipazo ravina acrylic: lanja molekiola avo, henjana tsara, tanjaka ary fanoherana simika tena tsara. Ity karazan-takelaka ity dia miavaka amin'ny fanodinana andiany kely, ny tsy fitoviana tsy mitaha amin'ny rafitra loko sy ny firafitry ny volo amboniny ary ny famaritana vokatra feno, mety amin'ny tanjona manokana samihafa.
taratasy akrilika opal
Opal Acrylic Sheet dia mety amin'ny rindranasa mitaky ny hatsarana sy ny fahadiovan'ny acrylic izay takiana ny vokatra misy fiantraikany avo lenta kokoa. Izy io dia mitazona ny lokony mazava tsy tapaka alohan'ny fanamboarana sy aorinan'ny famolavolana, manome ny fampitaovana ary mampiseho ny hakantony irina very miaraka amin'ireo plastika novaina hafa izay manome endrika "indostrialy".
Ny acrylic fotsy dia manana toetra mahasoa maro izay mahatonga azy io ho fitaovana miavaka indrindra ho an'ny vokatra marobe. Ny takelaka, jiro, aquarium, shade, ary vokatra fanaka maro hafa dia mampiasa acrylic fotsy hanatrarana ny famaranana mamirapiratra sy kanto izay mahasarika ny mpanjifa.
Ny takelaka akrilika dia antsoina hoe taratasy PMMA, Plexiglass na ravin-vera Organika. Ny anarana simika dia Polymethyl methacrylate. Ny akrilika dia mitazona ny fananana ara-batana amin'ny plastika noho ny mangarahara tena tsara izay mamirapiratra sy mangarahara toy ny kristaly, dia deraina ho "Queen of Plastics" ary tena faly ireo mpikirakira.
Ny teny hoe "acrylic" dia ampiasaina amin'ny vokatra izay misy akora azo avy amin'ny acrylic acrylic na fitambarana mifandraika amin'izany. Matetika izy io dia ampiasaina hilazana plastika mazava sy toy ny fitaratra fantatra amin'ny anarana hoe poly (methyl) methacrylate (PMMA). PMMA, antsoina koa hoe vera akrilika, dia manana fananana mahatonga azy io ho safidy tsara kokoa ho an'ny vokatra maro izay mety ho vita amin'ny vera.
ravina acrylic fotsy translucent
1.valizy akrilika pc iray:
rakotra taratasy asa-tanana na sarimihetsika PE amin'ny lafiny roa, ilay sarimihetsika mirakotra tsy misy famantarana ny compoany.
2.miaraka amina fonosana entana be pallet:
2 taonina isaky ny paleta, mampiasa paleta hazo sy paleta vy eo ambany,
miaraka amina fonosana sarimihetsika fonosana manodidina hiantoka ny filaminan'ny fitaterana.
3.Fonosana entana feno entana:
20-23 taonina (manodidina ny 3000 pcs) fitoeran-tongotra 20 metatra miaraka amin'ny 10 -12pallets.
Ny akrilika fotsy dia loko vita amin'ny akrilika. Acrylic, fantatra amin'ny anarana hoe plexiglass fitsaboana manokana. Ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny acrylic dia manana tantara efa zato taona mahery. Ny polymerizability ny acrylic acrylic dia hita tamin'ny 1872; ny polymerizability ny methacrylic asidra dia fantatra tamin'ny 1880; ny fomba synthesis ny propylene polypropionate dia vita tamin'ny 1901; ny fomba syntetika voalaza etsy ambony dia nampiasaina hanandramana ny famokarana indostrialy tamin'ny taona 1927; ny indostrian'ny methacrylate dia tamin'ny 1937 Nahomby ny fampandrosoana ny famokarana, ka niditra tao amin'ny orinasa mpamokatra entana lehibe. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, noho ny hamafiny sy ny fifindrany maivana, ny acrylic no nampiasaina voalohany teo amin'ny fitaratry ny fiaramanidina sy ny sehatry ny fitaratra fahitana tao amin'ny cab an'ny mpamily tanky. Ny nahaterahan'ny koveta fandroana akrilika voalohany manerantany tamin'ny 1948 dia nanamarika zava-bita vaovao tamin'ny fampiharana akrilika.